Momba anay - Xuzhou Lena Import Export Co., Ltd.
Swing Top tavoahangy
Tavoahangy menaka oliva
Tavoahangy Diffuser Reed
Tantely & Jam Jar
Xuzhou Lena Import and Export Co., Ltd., mpanamboatra tavoahangy fitaratra namboarina ao Shina, dia manana traikefa mihoatra ny 12 taona amin'ny fanomezana vahaolana fonosana fitaratra.
Manolotra karazana tavoahangy fitaratra izahay, toy ny tavoahangy zava-pisotro, tavoahangy ranom-boankazo, tavoahangy ronono, tavoahangy famenoana, tavoahangy kosmetika, tavoahangy aromatherapy, tavoahangy menaka tena ilaina, fitoeran-dabozia, siny tantely, siny jam, siny kafe, siny fitehirizana sakafo, sns. .
Manana ekipa mpamorona tsy manam-paharoa izay afaka mamolavola ny tavoahangy fonosana tianao araka ny hevitrao.Manaja sy manohana ny originality izahay ary mamadika ny hevitrao ho zava-misy.Tena zava-mahagaga izany.
Ny akora vita amin'ny vera dia nandalo fanaraha-maso hentitra tsara, mifanaraka amin'ny fenitra nasionaly sy fanondranana, ary fanohanana fanaraha-maso.Amin'izay fotoana izay ihany koa, ny sampan-draharahan'ny famokarana dia manana rafitra fitantanana famokarana feno mba hifehezana mafy ny fandaniana amin'ny fanaraha-maso ny kalitao mba hampitomboana ny tombom-barotrao.
Ny orinasanay dia manana milina decal elektrika rehetra amin'ny fanaovana fanodinana lalina ho an'ny tavoahangy fitaratra.Ny dingana lalina ataonay dia ahitana decal, fanontam-pirinty silk, hot stamping, frosting, sandblasting, hosodoko sy electroplating, sns. Ny baiko OEM sy ODM dia raisina, faly izahay mamolavola na mamokatra tavoahangy manokana, mitovy amin'ny hevitrao sy ny sary.Ny tiana atao dia ny manome serivisy tokana ho an'ny namana tsirairay.
Ny ekipan'ny varotra iraisam-pirenena dia manana fahaizana mifandray tsara ary afaka mahatakatra ny tena ahiahin'ny mpanjifantsika.Taorian'ny asa mafy nandritra ny taona maro, dia nanangana fifandraisana tsara tamin'ny mpanjifanay izahay ary nahazo ny fitokisany tamin'izao tontolo izao.
Feno fahatokisana ny vokatray izahay ary afaka manome santionany maimaim-poana ho an'ny fisavanao.Ny vokatra vita amin'ny vera dia naondrana tany amin'ny firenena sy faritra 100 mahery eran'izao tontolo izao.
Tongasoa eto amin'ny orinasa mba hitsidika sy hifampiraharaha.
Mpanamboatra tavoahangy menaka manitra 6 ambony eran-tany
Tavoahangy ranomanitra 6 ambony...